सुशान्तको नि’धनले मनिषा कोइराला स्तब्ध ! - News20 Media
June 15, 2020 June 15, 2020 N20LeaveaComment on सुशान्तको नि’धनले मनिषा कोइराला स्तब्ध !
काठमाडौं, १ असार । बलिउडकी चर्चित नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले सुशान्त राजपुतलको नि,धनले आफू स्त’ब्ध भएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले सुशान्तको निधनले आफू स्त’ब्ध भएको बताएकी हन् ।
सुशान्त आफ्नै घरमा उनले आइतबार पा,सो लगाएर आत्म ह,त्या गरेका थिए। ३४ वर्षीय राजपुतको नि,धनलाई लिएर सिंगो भारतीय चलचित्र उद्योग यतिवेला शो’कमा छ। सिंहको निधनलाई लिएर बलिउडका स्टारहरुले राम्रो स्टार गुमाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत श्र’द्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन् ।
टेलिभिजनबाट करिअर सुरु गरेका उनले पछिल्लो समयमा ठूलोपर्दामा आफ्नो उल्लेखनीय अभिनयका कारण चर्चा कमाइ रहेका थिए । ‘डिटेक्टिभ ब्योमकेश बक्शी, एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी, र्का पो चे र छिछोरे उनले मुख्य भूमिका निभाएका चलचित्रहरु मध्ये हुन् । उनको अन्तिम चलचित्र केदारनाथ बन्न पुग्यो ।